Oclean X Pro Smart brush brush - chefuo ndị dọkịta ezé | TeraNews.net
na-ede akwụkwọ Nikitin Eugenius E bipụtara 01.11.2021
Ngwaahịa Oclean anaghị achọ mmeghe. A bịa n'ihe gbasara ịdị ọcha ọnụ, ika a bụ nke mbụ bịara napụta. Onye nrụpụta jisiri ike jikọta teknụzụ dị elu na ịdị mfe iji, na-enye onye na-azụ ahịa ngwaahịa na ọnụahịa kacha mma. Oclean X Pro smart brush brush abụghị ihe ọzọ. Ihe dị mma bụ na onye na-emepụta ihe na-emepụta ngwaahịa kwesịrị ekwesị ma mee ka o kwe omume ịzụta ya na ọnụ ahịa ego.
Oclean X Pro brọsh eze smart - uru
N'ezie, ọnụ ahịa dị ọnụ ala bụ isi uru. Ọzọkwa, na akụkụ ya, akara Oclean enweghị ọtụtụ ndị asọmpi. N'okpuru ebe a ị nwere ike ịhụ nkọwapụta site na iji Oclean X Pro, dịka ọmụmaatụ, na akara Oral-B ama ama.
Uru nke Oclean X Pro brọsh eze nwere ọgụgụ isi:
Nlekọta mara mma. Ọnụnọ nke ihuenyo mmetụ nwere diagonal nke 0.96 inch abụghị nke ukwuu. Gịnị kpatara na enyeghị onye nwe ya njikwa nghọta na inye ụdịdị ahọpụtara. Ọ dịghị mkpa ịpị bọtịnụ, ịhọrọ ọnọdụ dị mma - ihe niile dị oke mfe. Site n'ụzọ, atụmatụ nke brọsh eze adịghị emetụta. Kama nke ahụ, Oclean X Pro dị ka ngwa sitere n'ọdịniihu.
Ịcha ezé dị elu. Maglev brushless moto nwere ike ime mmegharị 42 kwa nkeji. Nke ahụ dị ọtụtụ, ọbụlagodi maka brọsh eze ọkụ eletrik ọ bụla.
Smart ezé ihicha usoro. Oclean X Pro nwere gyroscope nke nwere ike ịchọpụta ntụziaka mmegharị ahụ, akụkụ nke ọchịchọ na nrụgide nke ahịhịa na enamel eze. Ọfọn, nke a bụ kpọmkwem ihe anyị na-ahụtụbeghị na brọsh eze mmefu ego.
Ọtụtụ ụdị nhicha. Mee mgbakọ na mwepụ - ụdị nhicha 3 (mgbe niile, ịcha ọcha na ịhịa aka n'ahụ). 32 ike etoju (yana-arụ ọrụ ụdịdị - nke a bụ ugbua 96 iche). Na ntọala 20 dị njikere na ebe nchekwa nke ahịhịa eze Oclean X Pro. Ọ bụghị eziokwu na onye nwe ya ga-eji ha niile eme ihe, ma ọ ga-ahụrịrị nhọrọ kwesịrị ekwesị maka ịcha ezé ya.
Ezigbo nnwere onwe. Onye nrụpụta na-ekwu na ahịhịa ga-arụ ọrụ ụbọchị 30 n'otu chaja batrị. Site n'ụzọ, ọ na-ewe naanị awa 2 iji chajịa batrị. Ọbụlagodi na ihicha kpụ ọkụ n'ọnụ, Oclean X Pro na-eme nke ọma karịa ndị asọmpi ya ugboro 2-3 n'usoro oge ọrụ.
Oclean X Pro brọsh eze vs Oral-B iO 8
Onye ga-ekwu na ị nweghị ike iji ngwaahịa ndị China na-emepụta ihe tụnyere akara ama ama na Germany. Ọ ga-abụkwa ihe ọjọọ. N'ihe gbasara arụmọrụ, Oclean karịrị onye asọmpi dị ọnụ karịa Oral-B. Ee, enwere ntụpọ na atụmatụ inye. Dịka ọmụmaatụ, Oral-B iO 8 na-abịa na ọdụ nchaji magnet ma nwee ngụ oge arụnyere na ihe ngosi ọkụ. Mana ịkwụ ụgwọ ugboro 2 karịa maka nuances ndị a dị oke ọnụ.
Emeputa Oclean X Pro (China) Oral-B iO 8 (Germany)
Ndụ na otu ụgwọ Ụbọchị 30 Ụbọchị 14
Ngosipụta agba Ee Ee
Njikọ ekwentị Ee (nsochi nhicha zuru oke) Ee
Ụdị nhicha 3 (enwere nrụnye 20) 6
Ọkwa ike 32 1
Technology Ultrasound Ngwunye
Ghichaa ọdịdị isi Oval A gburugburu
Nhicha kwa ụbọchị Ee Ee
Nlekọta chịngọm Ee Ee
Ọkachamara nhicha Ọ dịghị Ee
Nhicha asụsụ Ọ dịghị Ọ dịghị
Ngosipụta ọkụ nke nhicha ziri ezi (ezighi ezi). Ọ dịghị Ee
Ngụ oge site na ihicha oge Ee Ee
Omume ọma Ee Ee
akwadoro ọnụ ahịa $ 120 $ 300
N'ihe gbasara akara China Oclean, Oclean X Pro smart brush na-enye akwụkwọ ikike nke onye nrụpụta afọ 2. Nke a na-egosi na ụlọ ọrụ ahụ na-emepụta ngwaahịa dị elu n'ezie. Onye na-ere ahịa nwere ike ibupu ngwongwo site na ụlọ nkwakọba ihe na Poland ma ọ bụ Russia - nke a na-ekwe nkwa ịnye ndị na-azụ ahịa ngwa ngwa ngwa ngwa.
Ị nwere ike zụta brọsh eze nke Oclean X Pro site na njikọ a na aliexpress... Anyị na-akwado iji kupọns mbelata:
SPTOWH150 (ịtụ ihe karịrị 690 rubles - 150 rubles ego).
SPTOWH250 (ịtụ ihe karịrị 1290 rubles - 250 rubles ego).
SPTOWH350 (ịtụ ihe karịrị 1990 rubles - 350 rubles ego).
SPTOWH450 (ịtụ ihe karịrị 2690 rubles - 450 rubles ego).
SPTOWH600 (ịtụ ihe karịrị 3490 rubles - 600 rubles ego).
SPTOWH800 (ịtụ ihe karịrị 4890 rubles - 800 rubles ego).
UFS 4.0 - Samsung na-agbaji stereotypes
Drone DJI Mini 3 Pro tụrụ gram 249 yana ngwa anya dị jụụ
Samsung Pro Endurance microSD maka ndekọ vidiyo
Bolts Smart Screw Njikọ na Wi-Fi
Starlink na-ewepụta ọrụ Portability maka ụgbọ ala
Microsoft Open Source Onye na-eme ihe nkiri 3D
ASUS GeForce RTX 3080 10GB Noctua Edition kaadị eserese
Flagship Nokia N73 kwuputara na igwefoto 200 MP
Apple, Google na Microsoft na-emegide Mmezi Ikike Mmezi
Igbe Dune HD RealBox 4K Box: Worth Buy
MiTo MT3 Noctua Keycap Set - na njedebe nke mmekorita ọhụrụ
Gịnị bụ Wi-Fi 6, gịnị kpatara ya ji chọọ ya na kedụ atụmanya
2022 - Teranews. Ikike Niile Echekwabara